Oromo Badiin biyya jiru waliin wal hubachuutt ka’anii jiru. Hiriirrii fi hirpha funaanuu soneessuun jalqabbamee jira. Gabaabaamatt faara biyyaa waliin wal hubachuuf faara dansa agarsiisuutt kahaniiru. Sadarkaa adda addaatt walgahiin ambaa fi gochooti malbulchaa bakka bakkatt eegalaa jiru. Qubqabsiisi dhikkistuu sabicha calaqisaa jiru. Hundu dhimma biyyaan qabamee ijra.Malbulcheessitooti keenya mamanca’aa jiru. Jaarmota Oromoo Badiif karaa itti salphaatt luuxan argatanii waan ABOtt godhan gochuuf waamicha gochaa jiru. “Jettee duute ...” hajedhaniif moo, dhuguma inni kaan nu amana jedhaiituu, moo maqoo hafe qabu. Jarmota Itophiyaa irraayyuu empayeritt oolchuuf tumsa gaafachaa jiru. Ejjennoon kamuu dudhamaa fi kutannoo gaafata. Ergamsi nammi tokko qabu tokkummaa Itophiyaaf loluu yoo tahe utuu hin daddaaqin itt deemuu dha. Asii fi achi jechuun gaaf tokko adamsituu ayyaanaa karaa halleen honga’o godhee hambisuu dandaha. Sabboonoti yaada hamaa of duubaa hinqabne, roga dhiisanii deeman bulbulu manna irraa maqanii dubbiin akka fedha sheet hanga xumaramtutt eegu; yoo beekaa hankaaksuu barbaadan malee.